Ifonti ye-Instagram - I-Font Generator engcono kakhulu yamahhala ne-Premium
Idatha Yokuvikela Ipholisi
"Yini Ifonti ye-Instagram kufanele ngisebenzise?" umbuzo esiwuzwa kakhulu, futhi kulula ukuwuphendula! Kunezinhlobonhlobo eziningi zamafonti e-Instagram ongakhetha kuwo: nawa amafonti e-Instagram angcono kakhulu angama-38 ngezidingo zakho ze-Instagram. Uzothola womabili kulolu hlu. amafonti amaningi e-Instagram amahhala.
S҉p҉o҉ok҉y҉ - Z҉a҉l҉g҉o҉ T҉e҉x҉t҉
ѕωєєт ¢ υтє ƒσηт
Ɠð † hï ¢ § †êx † £ ðñ †
ꌗ℗ @ © ҽ ຯ ℒҽ ꓄꓄ ҽ® ꌗ
𝐅𝐨𝔫т 丂 𝐨𝐅 𝕚𝔫 丂 т𝓪𝑔ℝ𝓪м
千 𝓸𝔫𝕥Ｓ 𝓸 千 𝖎𝔫Ｓ𝕥ᗩ ﻮ𝓻ᗩ м
Ifonti ye-Instagram - Amafonti e-Instagram Iyini?
Leli ithuluzi le-Instagram elikuvumela ukuthi uguqule ifonti ye-Instagram. Okulandelayo yizinhlobo zohlobo ezidume kakhulu ku-Instagram: Wonke Osonhlamvukazi, Ofeleba Abancane, Umbhalo Webhamuza, Umbhalo Oyisikwele, Ogqamile, Umbhalo Omdala WesiNgisi, I-Italic, Umbhalo Ose-Upside Down, I-Strikethrough, I-Invisible Ink, ne-Zalgo. Zonke izitayela zingasetshenziswa ezinkundleni zokuxhumana noma ezinkundleni zemiyalezo ngaphandle komkhawulo. Umphumela uba umbhalo ocacile wesitayela se-Unicode ku-Notepad.
Esigabeni sokuqala, faka umbhalo ofuna ukuwushicilela. Isiguquli sombhalo sishintsha ngokushintshayo umbhalo ngokuhamba kwesikhathi. Ungakopisha bese unamathisele ku-Instagram, Twitter noma ku-Facebook. Lawa mafonti e-instagram angasetshenziswa kumaphrofayili, ifonti ye-instagram namazwana. Uma ufuna izinhlobo zombhalo ezi-squiggly, ungasebenzisa izinhlamvu ze-emoji noma ze-Unicode ukuze ukuxube.
Izithonjana ezikhiqizwe yile generator akuwona amafonti e-Instagram wangempela kodwa amasethi wesithonjana. Ku-Instagra, ngakho-ke, ungakopisha futhi unamathisele ku-bio yakho namazwana. Ukube bekungamafonti angempela, ubungeke ukwazi ukuwakopishela kwezinye izindawo ("ukukopisha bese unamathisele ifonti" akwenzi mqondo - abaklami bewebhusayithi bakhetha ifonti oyisebenzisayo, engaguquleki).
Kodwa uma uwabiza ngamafonti (noma amafonti e-Insta, noma amafonti e-IGG ngamafuphi;), ubani onendaba naye? Lokhu akuhloselwe ukululaza izinga le-Unicode. Kuyamangalisa ngempela - izimpawu zombhalo ezingu-100.000+, okuhlanganisa yonke into kusukela kuzinhlamvu zezinhlamvu zokuhlanganisa njengalezi eziboniswe ngenhla, kuya kuzimpawu ze-emoji eziyinqaba ezimelela izinkulungwane zezinto ezihlukahlukene.
Uma noma yiziphi izinhlamvu ezihlukile ezibalwe ngenhla zingasekelwa ku-Instagram bio yakho (noma zivela njengamamaki emibuzo noma izikwele ezilula), idivayisi yakho kungenzeka iphuthelwa izinhlamvu ze-Unicode ezidingekayo. Ngenxa yokuthi iphrothokholi ye-Unicode inkulu kakhulu, kuzothatha isikhathi eside ukufaka zonke izimpawu kumagajethi azayo, kodwa inqubekelaphambili iyashesha ngakho kungase kuphele inyanga noma ezimbili ngaphambi kokuba isiphequluli/idivayisi yakho izisekele.
Ngiwakha kanjani amafonti e-Instagram?
Isinyathelo 1: Iya ku https://instazoom.mobi/instagram-schrift/
Isinyathelo 2: Kubha yamathuluzi, faka umbhalo ofuna ukuwenzela ifonti
Isinyathelo 3: Kopisha ifonti oyifunayo bese uyinamathisele lapho ufuna khona.
Amafonti e-Instagram enza ukuphawula kwakho noma imigqa yesimo igqame futhi iveze ubuntu bakho. Zonke zikhethwa ngokukhululekile. Noma yimiphi imibuzo mayelana nalolu hlelo lokusebenza oluvela kithi, ungasishiyela umlayezo: Kontakt
© 2021 - 2022. Wonke amalungelo agodliwe - instaZoom.Mobi